प्रदेश २ का मन्त्रीलाई गाडीमाथि गाडी! spacekhabar
प्रदेश २ का मन्त्रीलाई गाडीमाथि गाडी!
स्पेसखबर जनकपुर, २६ पुस
प्रदेश २ सरकारले २२ महिनामा उपलब्धिमूलक काम खासै गर्न सकेको छैन। मन्त्रीहरूले सेवासुविधा र सुखसयलमा भने कुनै कमी राखेका छैनन्। उनीहरूले तीनवटासम्म सरकारी गाडी उपभोग गरिरहेका छन्। केही मन्त्रालयले नयाँ गाडी खरिद प्रक्रियासमेत अघि बढाएका छन्।
नयाँ गाडी प्रयोगमा ल्याएपछि पुरानोचाहिँ प्रशासनलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ। तर, उनीहरूले पुराना गाडी पनि छाडेका छैनन्। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मात्रै नयाँ किनिएको ज.१झ ४५६ नम्बरको एउटा गाडी प्रयोग गर्छन्। आर्थिक मामिलामन्त्री विजय यादव, सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह, वन, पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश राय, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले दुवै गाडी चलाउँदै आएका छन्। उनीहरूले पुरानो गाडी आफन्त, परिवार र कार्यकर्ताको प्रयोगमा दिएको खुलेको छ। मन्त्री साहले नयाँ गाडी ज.१झ ४४६ र एउटा अर्को प्रयोग गरिरहेका छन्। कानुनमन्त्री यादवले ज.१झ ४४२ नम्बरको गाडी प्रयोग गरिरहेका छन्।
महँगो गाडीको मोहप्रति वन राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलले सार्वजनिक रूपमा विरोध जनाएका छन्। उनले शुक्रबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत त्यसमा असहमति जनाए।
मन्त्री रायले राज्यमन्त्री मण्डलको आरोपको खण्डन गरेका छन्। ‘मन्त्रालयमा मन्त्री मात्र हुँदैनन्, त्यहाँ विभिन्न निर्देशनालय हुन्छन्। तिनमा कर्मचारीलाई काम गर्न गाडी आवश्यक हुन्छ’, मन्त्री रायले भने। आफ्नो मन्त्रालयबाट निर्देशनालयकै कामका लागि गाडी खरिद गर्न लागिएको उनको भनाइ छ। ‘हाम्रो राज्यमन्त्री आफैं सरकारी सुविधा उपभोग पनि गर्छन् र आफैं विरोध पनि’, उनले भने, ‘उनको यो दोहोरो नीति मैले बुझ्न सकेको छैन।’ अन्नपूर्ण पाेस्टमा खबर छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस २६, २०७६, ०६:३४:००